IWordPress: Uluhlu lwePhepha loMntwana njani (iplagi yam entsha) | Martech Zone
I-WordPress: Uluhlu lwePhepha loLuhlu lwabaNtwana
NgoLwesihlanu, Julayi 13, 2018 NgoLwesihlanu, Julayi 13, 2018 Douglas Karr
Siye sakha kwakhona ulawulo lweendawo zabathengi bethu beWindowsPress, kwaye enye yezinto esizama ukuzenza kukucwangcisa ulwazi ngokufanelekileyo. Ukwenza oku, sihlala sifuna ukwenza iphepha eliyintloko kwaye sibandakanya imenyu edwelisa onke amaphepha angezantsi kwayo. Uluhlu lwamaphepha abantwana, okanye iziqendwana. Ngelishwa, akukho msebenzi wendalo okanye inqaku lokwenza oku ngaphakathi kweWindowsPress, ke siphuhlise Uluhlu lweWordPress Izihlokwana ezimfutshane ukongeza kwimixholo yemisebenzi yefayile.php.
Ukusetyenziswa kulula kakhulu:
Akukho maphepha omntwana
aclass -Ukuba ungathanda ukufaka iklasi kuluhlu lwakho olungabhaliswanga, ngenisa apha.
ukuba -Ukuba akukho maphepha omntwana, ungafaka isicatshulwa. Oku kuza kuluncedo ukuba luluhlu lwemisebenzi evulekileyo… ungangena “Akukho kuvulwa kwangoku.”
umxholo - Lo ngumxholo oboniswe ngaphambi koluhlu olungabhaliswanga.
Ukongeza, ukuba ungathanda Isicatshulwa esifutshane Ukuchaza iphepha ngalinye, iplagi yenza ukuba izicatshulwa kumaphepha ukuze uhlele loo mxholo kuseto lwephepha.
Ekugqibeleni ndaye ndatyhala ikhowudi kwiplagi ukwenza kube lula ukuyifaka kunye nokuyisebenzisa, kunye Uluhlu lwePlagi yekhowudi emfutshane yomntwana ivunyiwe yiWordPress namhlanje! Nceda ukhuphele kwaye uyifake-ukuba uyayithanda inike uphononongo!
tags: uluhlu lwamaphepha abantwanauluhlu oluncinciPluginshortcodesWordPressiplagi yamagama